RUGTA MULTICASE "BOA": SHARAXAAD, QAABABKA NAQSHADEYNTA, SAMAYNTA GACMAHOODA - BEEKEEPING
Qaybta "Boa", oo uu hormariyay Vladimir Davydov, waa mid isdhaafsan oo si sahlan loo ilaaliyo, iyo sidoo kale raaxo leh shinni. Dhibaatada ah ee u adeegidda gurigan shinni waa yar yahay, iyo natiijada, taas oo ah pcheloproduktsiya, si buuxda xaq u ah dadaalka.
Tilmaamaha iyo qaababka naqshadeynta
"Boa" waa nooc yaryar oo isweydaarsi ah, qaybtaas oo ah mid ka mid ah afar meelood oo ka mid ah maskaxda "Dadan". Halkan cabbirka miisaanka waa 110 × 280 mm.
Waxa kale oo aad samayn kartaa rugtaada alpine iyo rugta dhiska.
Qaabka guud ee "Boa" ballaaran oo khafiif ah, bararka sare wuxuu leeyahay propyl taas oo gobolka oo dhan lagu meeleeyo qaabka. Faahfaahinta dheeraadka ah ee wata xadhig looma baahna sababtoo ah qiyaas yar. Xaashida caadiga ah ee malabku hoos yimaad rugta Dadanovsky ayaa loo qaybiyaa afar qeybood oo aan lahayn inta hartay, sida kakooban sida ugu muuqata waxa loo rogaa "boa".
Ma taqaanaa? Shinni ayaa awood u leh inuu qaado xajmiga 320 jeer oo laftirkiisa laftiisa, hadana waa in uusan ku dhajin dusha sare.
Root ka samaysan tufaaxa ama dukumintiga, naqshadeeda gaarka ahi waxay bixisaa barkin shidaal 30 mitir ah, taas oo, haddii loo baahdo, kululaynta waxaa ka buuxsamey lakabka xajka. Waxaa la siiyaa dalool loogu talagalay hawo-qaadid leh dhexdhexaad ah oo ah 13 mm, inta badan waa la xiraa. Keeska kaneecada "boa" wuxuu leeyahay qiyaasta 375 × 360 × 135 mm. Waxay ku habboon tahay 9 shey. Qaybta hore ee mid kasta waxaa jira qiyaas ah 19-milimitirit. Marka jidhka oo dhan laga buuxiyo malab, waa miisaankiisu yahay 12 kg, miisaanka mid madhan waa 3 kg. Qeybta hoose ee la tuuri karo waxaa jira gogol gaabis ah oo god leh. Naqshadda gaarka ah ee hoosta ayaa kuu ogolaanaysa inaad si guul leh wax uga qabato shillinta, waxay bixisaa hawo qaadasho, waxay fududeyneysaa in lagu xakameeyo kabaha iyo daryeelka cayayaanka.
Ma taqaanaa? Bees-ka-dhaafka ah ayaa si wadajir ah u hibdled-ga ah ee khafiifka ah, dusha sare ee uu leeyahay dhismo cufan, iyo furaha - ka badan oo dabacsan, cayayaanka si joogto ah u beddelaya midba midka kale. Haddii ay ku dhacdo xeelad, waa la isku cadaadiyaa, taankana waxaa lagu yareeyey cabbirka, kuleylka - sii ballaarinayaan. Sidan oo kale, shinni ayaa maamula heerkulka aan ka yarayn 24.5 darajo ee kooxdooda.
Naqshadeynta rugta "Boa" waa mid sahlan oo waqti isku mid ah si sahlan loo ilaaliyo oo lagu guuleysto shinnida, iyo tan ugu muhiimsan, waa suurtagal in la sameeyo gacmahaaga haddii aad haysato qalabka saxda ah. Tani waxay noqon doontaa ikhtiyaarka ugu wanaagsan, tan iyo beekeeper, oo sameeyey kallaha naftiisa, si fiican u bartay naqshadeeda iyo u casriyeyn karaa iyada oo baahida gaarka ah.
Qaybta "Boa" waxay leedahay sifooyin gaar ah:
ma laha wax barkiis ah oo kuleyliya, ama lakabshanka, cabbirka yar ee qaabka iyo isafgaradka qaabdhismeedka ayaa u oggolaanaya ilaalinta dheelitirka heerkulka;
Qaab dhismeedka wuxuu ka kooban yahay qaybo, taas oo, hadday lagama maarmaan noqoto, laga saaro ama, liddi ku ah, kudheeraato, iyo mabaadiidaani waxay kuu oggolaaneysaa inaad daryeesho shinnida habdhaqan sida xitaa xilliga qaboobaha gurigoodu uusan qaboobin marka qaybta la bedelo;
inta lagu jiro daaweynta shilinta, taas oo la sameeyo laba jeer ama sadex goor sannadkii, qadar gaar ah ayaa loogu talagalay inay sameyso samatabbixin, kaas oo u oggolaanaya in laga saaro cayayaanka waxyeellada leh iyada oo aan la saarin rugta oo dhan;
kuwa isticmaala rugta Boaaga waxay u badantahay in ay qoysasku u kala qaybiyaan si cad oo aan loo dabooli karin;
qaabka "Boa" wuxuu leeyahay qiyaas yar oo ku filan si uusan u isticmaalin furuuruc nucleus ah marka lagu daro, marka ay noqoto mid lagama maarmaan u ah in laga saaro dheddigga;
xilliga qaboobaha, sababtoo ah tirada yar ee jir ah, bees yihiin, ugu horeyn, awood u leh inay ilaaliyaan heerkulka raaxada, iyo labaad, waxay si buuxda u hagaajiyaan jir ah.
Faa'iidooyinka iyo qasiidooyinka fiiqan
Tixgeli faa'iidooyinka iyo khasaarooyinka naqshadahan. Qaybta "Boa" waxay heshay aqoonsi jawi beero-dhireed oo ay uga mahadcelisay faa'iidooyinka:
Sababtoo ah xaqiiqda ah in jidhku leeyahay dherer yar, ma ahan lagama maarmaan in la garaaco gaashaanka inta lagu jiro wax soo saaridda.
Xakamaynta wadajirta waxay siisaa xasiloonida qaab-dhismeedka marka kiisaska lagu dhajiyo mid kale.
Marka qaybta ay buuxsanto, miisaankeedu waa 12 kg, si kor loogu qaado oo u dhaqdhaqaaqo, uma baahna dadaal badan, mana jirto baahi loo qabo caawiye.
Iyadoo loo eegayo xajmiga yar ee muraayadaha, lagama maarmaan in la sii xoojiyo xadhigga.
Dukaanka Medogonka wuxuu heystaa labo muraayad yar "Boa".
Xaashida caadiga ah ee malabku, u qaybsan yihiin afar qaybood, waxay ku habboon tahay in la buuxiyo afar geesoodka Boa, oo aan qashin lahayn.
Qaadashada waxay qaadataa dhowr ilbiriqsi waxayna ku dhacdaa meel dhexdhexaad ah qaybta sare ee xadka.
Frames, sababtoo ah cabirkooda yar iyo la'aanta silig, ayaa aad ugu sahlan iibinta malab.
Dhammaan qeybaha rugta ayaa ah kuwo la siman yahay, mideysan, taas oo ka dhigaysa mid aad u fudud in la shaqeeyo.
Sababtoo ah xaqiiqda ah qaabka cabbirka isku midka ah, way sahlan tahay in la qaado buulkisa, diyaarinta jiilaalka.
Miisaanka guud ee rugta aan si buuxda loo isticmaalin sababtoo ah xaqiiqda ah in qaybaha iyo mootooyinka ay yihiin kuwo yaryar oo ay jiraan meelo badan oo aan bannaanayn. Si kastaba ha noqotee, meeshan banaani ah waxay u oggolaanaysaa bees si fudud u ilaalisa unugyada iyo unugyada, iyaga oo helaya iyaga, iyo sidoo kale inay la socdaan waddooyinka oo si xor ah ula xiriiraan ilmo-galeenka.
Qaybta "Boa" waa fiican tahay sababtoo ah naqshadiisu waxay kuu ogolaaneysaa inaad xakamayso gobolka deegaanada shinniinka iyo heerka malabku soo saaray, sidoo kale wuxuu leeyahay hawo fiican oo ay ugu wacan tahay laaluushka.
Laakiin, sida ay dhacdo inta badan, wuxuu leeyahay qaar faa'iido daro oo ka muuqda muuqaalada:
Sababtoo ah mugga yar ee kaabajka Boaaga, waxay u baahan yihiin qiyaastii shan jeer jiilaalka gumeysiga shinni, taas oo u baahan ujeedo keliya Dadan.
Aagga yar ee hoose wuxuu ka dhigayaa qaab-dhismeedka aan degenayn, laakiin daboolka hoose ee guriga shinni oo dhan, lid ku ah, wuxuu ku darayaa xasiloonida.
Waxay qaadataa wakhti yar iyo qalab si ay u samayso qaybta "Boa", si kastaba ha ahaatee, haddii aad ka fiirsato in ay ku jiraan laba iyo badh ka mid ah rugta "Dadan", gabagabadu waa in ay wali tahay mid shaqeynaya.
Beekeepers inta badan waxay ku shaqeeyaan shinni quudinta. Si taas loo sameeyo, waxaad samayn kartaa malab ama Candi.
Samaynta "Boa" adiga laftigeeda
Master, kaas oo go'aansaday in uu dhiso beerhiisa u gaar ah ee beeska of Boa, waa in la soo saaro aqoonta loo baahan yahay, dulqaad, qalab iyo qalab. Bilowga dhismaha jirka, markaa waxaad u baahan tahay inaad eegto cabirkeeda. Tani waa aasaaska rugta mustaqbalka, iyo marka ay diyaar tahay, sii wad inaad sameysid hoosta iyo daboolka. Ka dib markii rugta la sameeyo, qoryaha waa in la rinjiyeeyo si loo kordhiyo nolosha alaabta.
Wixii rugta "Boa", waxaad u baahan doontaa:
kuraasta 35-40 cm dheer, 5 cm qaro weyn iyo 14-15 cm ballaaran;
carnations yar yar (25 mm), oo aad la soo ururin doono shaxanka;
dhejinta alaabta guriga iyo jajabyada (14 mm);
isudiyaarinta si loo xajiyo muraayadda marka la qodayo;
ciddiyaha 50 mm;
Isku xirxirashada isku dhejinta dhererka isku midka ah;
farsada korontada iyo 12mm dharka matoorka;
taliyaha iyo ruqsadda;
macnaheedu waa rinjiyeynta rugta "Guri Caafimaad" ama "Pinotex".
Tilaabooyinka wax soo saarka
Geedka rugta waa in si wanaagsan loo qalajiyaa si looga fogaado isbedelka sababtoo ah barar ama qalajinta inta lagu jiro hawlgalka dhamaystiran. Waa in maskaxda lagu hayaa in inta lagu jiro qallajinta guddiga ay sidoo kale qaabeynayaan, sida haddii uu dhinac ka dhuubanayo oo ka soo horjeeda dhinaca kale. Sida loo diyaariyo banaan dusha sare ee wax soo saarka ee rugta, fiiri video.
Keenista kiisaska "Boa"
Marka hore u samee jirka ka mid ah rugta, ka dibna cabbir, hubi saxda ah ee cabbiraha la helay. Qiyaasaha dibedda ee kiiska: 375 × 360 × 135 mm, gudaha: 335 × 300 × 135 mm.
Ma taqaanaa? Marka la isku ururiyo malab isla markaa, inta u dhexeysa 25 iyo 50% ee shinni-shaqaynta ayaa la qabsadaa, kuwa kalena waxay leeyihiin ganacsi kale: waxay daryeeshaan dhasheyaal, dhisto malabyo cusub, qaadaan nectar waxayna u habeynayaan malab, qolka hawo iyo wixii la mid ah.
Isticmaalka sawir wareega, waxaad u baahan tahay inaad udiyaariso laba baaluq oo 135 × 400 mm oo ka soo jeeda 50 milimitir gudaheed, kuwani waa gundhigyada hore iyo gadaasha dambe, iyo hal baaldi 135 × 360 mm waa saldhigga derbiyada 20mm weyn, sidaa daraadeed biilka soo go'ay waa la jarayaa laba qiyaasood oo ku haboon.
Maqnaanshaha derbiyada hore iyo gadaasha 30 mm, si ay u noqoto shaqada ay ka shaqeyn doonaan, waa in sidoo kale loo keenaa cabbirka la doonayo. Sidaa darteed, waxaad heleysaa laba bannaan oo 375 × 135 × 30 ee hore iyo dambe iyo 340 × 135 × 20 loogu talagalay derbiyada dhinaca kiiska.
Fiidiyowga ayaa si faahfaahsan u muujinaya sida loo saxo si loo diyaariyo, qalabkii loo adeegsan lahaa, iyo qaar ka mid ah xasaasiyadaha ayaa lagu tilmaamay.
Ma taqaanaa? Bees, ddadka xijaabka ah ee kaynta, qiiqa dareemaya, waxay u aqoonsadaan sida dabka kaynta. Hadday sidaas tahay, waa inaad cuntaa malab ka hor inta aanad meel fog ka fogeyn raadinta guri cusub. Xayawaankii hore ee isku dayey in uu isku dayo ka hor tuulada ayaa lumisa xajmiga iyo ma awoodo inuu isticmaalo sting. Dareenkani iyo isticmaalaan beekeepers, fumigating xayawaanka.
Meelaha bannaan ee jira, dooro rubuc, ama ka dhig mid isku laab:
11 × 15 mm - in lagu xiro xarigaha;
11 × 15 mm - oo hoosta ku jirta;
20 × 20 mm - in lagu xiro derbiyada hore iyo dhinacyada;
15 × 20 mm xagga hore iyo gadaasha kiiska.
Sida loo doorto xaafadaha sawir wareeg ah ama mashiinka qalajinta, oo lagu faahfaahiyay si faahfaahsan oo lagu muujiyay fiidiyaha.
Isticmaalida mashiinka qalajinta ama sawirada wareega ee derbiga dhinac ah, waxaad u baahan tahay inaad sameysid jeex si aad uhesho fududaynta hawlgalka xajmiga gacantiisa, iyo sidoo kale dherjir dariiqa 13-mm ee derbiga hore.
Waa muhiim! Waxay u fiicantahay in la sameeyo haashka leh khiyaamo yar oo dibadda ah oo loogu talagalay suurtagalnimada biyo yaraanta roobka.
Markaad diyaariso dhammaan faahfaahinta, waxaad sii wadi kartaa kiiska kiiska. Si taas loo sameeyo si dhakhso ah oo sax ah, waa inaad horey u sameysid jig ah, taas oo xagal quman oo loogu talagalay hagayaasha la arkay.
Markaad karti u sameyso qalabka shaqada adoo kaashanaya xagasha 90 ° darajo, waxaa lagu dhejiyaa caawinta ciddiyaha ama nadaamka isku dhejinta. Haddii kororka aan loo baahneyn sii ahaato ka dib marka la isku daro, waxaa lagu saaraa sanduuq ama sawir wareeg ah.
Fiidiyooga, dhammaan hawlaha kor ku xusan waxay si faahfaahsan u muujinayaan iyo shuruudaha.
Gawaarida muraayadaha ayaa leh cabbiraha soo socda:
top - 320 × 23 × 3 mm;
hoose - 280 × 23 × 3 mm;
Tareenka ugu sareeya ee dhexda dhexe waxaa lagu qalabeeyaa 270 mm × 2 mm jarista kaas oo madaxa la geliyo, iyada oo caawimadeeda ay ku xiran tahay qaabka iyada oo aan xirneyn dheerad ah.
Sidaa awgeed, cabbirka wareegga dhamaystiran waa 280 × 110 mm.
Si deg-deg ah, si ammaan ah oo sahlan u xakamee baararka xayawaanka ee qaabka, waxaad dhisi kartaa jig, sida lagu muujiyay fiidiyowga.
Markaad ka baxdid baararka oo aad heshay tiro ku filan oo wadooyin ah, waxaad bilaabi kartaa inaad qaabisid qaab-dhismeedka. Dareeraha ayaa sidoo kale loo dhisaa tan, maaddaama ay tahay muddo dheer, oo aan habooneyn in ay si gooni ah u shaqeyso qaab kasta oo si gooni ah, waana wax aan macquul aheyn in la ilaaliyo xaglaha saxda ah.
Qayb ka mid ah beeleyaal khibrad leh waxay helayaan caan ka mid noqoshada kaydsiga kaydka.
Qoraaga fiidiyowga wuxuu soo jeedinayaa farsamaynta samaynta kormeeraha, kaas oo aad si wada jir ah u isugu dhajin kartid 9 marxaaddo, ilaa iyo inta uu qaadanayo hal buuxa "Boa".
Ku dheji xayawaanka leh nalka yar ama alaab guri.
Waa muhiim! Waa in la ogaadaa in cabbirka alaabta la dhammeeyaa uu awoodo si weyn qalad, haddii aad isticmaasho siyaabo kala duwan oo lagu dhajiyo saxanka dhinaca hoose ee hoose.
Sameynta hoosta "Boa"
Boa waxay leedahay hoosta isku dhafan, waxaa lagu qalabeeyaa daaqado ka hortag ah, kaas oo sidoo kale u adeega dabaqa. Hoosta waxaa ka mid ah qoryaha casriga ah ee la kordhin karo. Tani waxay noqon kartaa lagama maarmaanka u ah hawo dheeraad ah ee guriga shinni ah. Iyada oo ay kala duwan tahay booska qiiqa, beekeeper ayaa xakamaynaya heerkulka labadaba dabka iyo xilliga qaboobaha.
Xuduudaha Dammaanada Wadajirka ah ayaa leh cabbir:
midka hore waa 375 × 90 × 30 mm, afar meelood oo ah 11 × 15 mm ayaa lagu soo xushay xagga sare, 20 x 20 mm dhinac kasta, waxaa lagu qalabeeyaa 335 mm qiyaastii iyada oo marinka mesh loo geliyo xagal, waxana uu u dhaqaaqaa grooves ka sameysan dhinacyada . On derbiga hore waa guddi wareejin karo oo leh cabbir ah 316 × 60 × 16 mm.
Waa muhiim! Waa muhiim in guddiga duulimaadka aan la rinjiyeeyn oo nuugo qoyaan marka ay roobabku da'ayaan. Haddii aad ku riixdo, waxay isla markiiba qoyaanaysaa, iyo shinnida imanaysa, baalasheeda ku dhejisid, waxay ku dhiman doontaa albaabka gurigaaga hal tallaabo ka hor badbaadada.
Gadaal - 375 × 50 × 30 mm, laab sare - 11 × 15 mm, dhinaca - 20 × 20 mm. Qaybta dambe ee dibedda waa mid dib loo soo celin karo, waxay ku xiran tahay taangiyada lee yahay.
lateral - 340 × 90 × 20 mm, rubuca sare - 11 × 15 mm, ka dib markii hoosta la isku soo uruuriyo, ka saar 1 mm laab laab, ka soo bixida dhinacyada.
Farqiga, kaas oo ku yaala dhinaca hoose iyo qiiqa, waxaad sameyn kartaa, haddii loo baahdo, rakibi quudiye.
Waa muhiim! Dhammaan xayndaabyada ku jira rugta waa in la duubaa si loo ilaaliyo mikroclimate rugta ee hawada iyo ku habboon inay la shaqeeyaan iyada oo aan cabsi ka qabin iyo dilida cayayaanka.
Farsamada farsamada ee faahfaahsan ee hoose ayaa lagu muujiyay fiidiyaha.
Sameynta daboolida rugta "Boa"
Badeecaddu waxay leedahay cabbir ah 375 × 360 × 70 mm waxayna ka kooban tahay:
derbiga hore iyo gadaalba - 375 × 65 × 20 mm dhinaca hoose iyo hoose ee 20 × 11 mm, darbiga hore waxaa ku yaal 13 mitir dhexroor, taas oo la xiro haddii loo baahdo;
derbiyada dhinaca - 342 × 65 × 20 mm oo leh rubuc lagu xushay 20 × 11 mm;
xaashida xayawaanka ee saqafka sare - 375 × 360 × 4 mm;
xaashida xayawaanka ee "saqaf" - 354 × 339 × 4 mm leh dalool 30 mm-dhexda ah ee bartamaha;
xumbo 335 × 318 mm;
Meelaha maqaar la'aanta ah ee saqafka - 415 × 400 mm oo leh 2-sentimitir lakab dhinaca dhinacyada.
Baro sida loo sameeyo wax rinjir iyo wax soo saaraha malab leh gacmahaaga.
Meel fog oo ah 20 mm oo kor ka sarreeya dhammaan darbiga afar geesoodka ah, waxaa loo sameeyay jilbaha korkiisa 4x6 mm.
Farsamooyinka wax soo saarka ee daboolka ayaa si faahfaahsan loogu muujiyay fiidiyaha.
Waxyaabaha ku jira shinnida "boas"
Nidaamka naqshaddan ma qaadanayo wakhti badan iyo dadaal loogu talagalay dayactirka. Bees-ka marar badan ayaa ka badan shan dhismayaal. Kadib dhammaadka xilliga jiilaalka, waxay sameeyaan duufaanta ugu horreysa, ka dibna dareenka qaar waa in la siiyaa xayawaanka laftirkooda.
Sida caadiga ah, ma jiraan shinni ku yaal xayawaanka ugu horreeya iyo kan labaad (hoose), waa in laga saaraa, meesha ugu hooseysa ee qashinka la uruuriyo waa in la nadiifiyaa, habka bee-geedka waa in lagu baaro qashinka iyo tirada shinni waa in lagu qiyaasay. Natiijada ku qanacsan, rugta waa in la xiro.
Ma taqaanaa? Xayawaankii hore, oo dareemaya dhimashada soo socota, xilliga jiilaalka marnaba uma oggolaan doono in uu dhinto rugta: way ka duushaa guriga. Bees dhintay Dhulka waa kaliya inta lagu jiro jiilaalka.
Dheeraad ah waxaa lagama maarmaan ah in laga gudbo heerkulka iyo xaaladaha kale ee cimilada. Waqtiga saxda ah, waxaad u baahan tahay inaad ku darto shax ay ku jirto dhumuc iyo guryo dheeraad ah. Ka dib markii duulimaadkii ugu horreeyey, toddobaadkii kaddib, waa markii ugu horeeysay, oo lagu qalabeeyay lakab, ayaa lagu daray. Waxaa la geeyaa halka ay ka jirto buulal leh cayayaanka, oo ku yaal qaybta. Qolooyinka soo socda, marka loo baahdo, ayaa la dhigayaa kuwa kor ku xusan. Haddii ay jirto baahi loo qabo in laga beddelo ilmo-galeenka ama si looga hortago soo-daadinta, sameysid foorno ficil ah. Kiiska, meesha ilmo-galeenka ku yaal, ayaa la soo noqdey, mid kalena waxaa lagu darey kor iyo hoosba. Saddex cisho ka dib, rugta cusub ayaa la dhigayaa meel u dhow midda hore, kaas oo ah shinnida duulimaadka ugu dhakhsaha badan u guuri doonto mid cusub. Haddii kormeerka xiga ee soo socda uu soo baxo in ay aad u xaddidan yihiin, waxaad u baahan tahay inaad siiso malab badan oo ah hal xaddad jirka ah.
Laga soo bilaabo waxa dhirta miraha laga soo qaado dhadhankiisa iyo tayada caafimaad leh. Akhri waxyaabaha ku saabsan chernoklenovogo, lime, buckwheat, hawada, bocorka, espartsetovy, phacelia, rapeseed, koriye, malab cows.
Marka qashinka ugu muhiimsan uu yimaado, waa in laga saaro maadooyinka ugu horreeya iyo kan labaad, badanaaba madhan ama buuxa perga. Laga soo bilaabo inta ka hartay sheyga laga soo koobay. Xilliga jiilaalka, shinni waa inuu ka tago laba jajab leh malab la daabacay, inta lagu jiro mudadaas shinni cuno 6-8 kg oo malab ah.
Qaybta "Boa" waa mid ku haboon beeraleyda bilowga ah, sidoo kale waxay faa'iido leedahay inta lagu jiro wareysiyada. Celcelis ahaan, beekeeper ka mid ah rugta helaa qiyaastii 50 kg ee malab, iyo sidoo kale alaabta shinni kale. Beehive "Boa" waxay leedahay taageereyaasheeda, bixisa abaalmarinta fududaanta, isdhexgalka iyo fekerka naqshadeynta, kaas oo la hagaajin karo haddii loo baahdo, la qabsashada shuruudahaaga, gaar ahaan haddii la sameeyey gacmahaaga.